Tenisy – “Can 2018”: tsy misy lanjany amin’ny fanjakana ireo atleta | NewsMada
Tenisy – “Can 2018”: tsy misy lanjany amin’ny fanjakana ireo atleta
Very fanahy mbola velona ireo atleta malagasy, hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Can 2018”, taranja tenisy. Hatreto mantsy, toy ny manao antso an’efitra izy ireo ny hanampian’ny fanjakana azy, amin’io fihaonana goavana io.
Hatreto, sady tsy mihaino no tsy mamaly ny fangatahan’ireo atleta malagasy, hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Can 2018”, taranja tenisy, ny fitondram-panjakana fa manao bemarenina sy minia tsy te hahalala fotsiny izao. Tsy misy lanjany amin’ny mpitondra amin’izao fotoana izao ity fihaonana goavana, hotanterahina atsy Botswana ny 5 – 10 novambra ho avy izao, ity fa toy ny “tournoi” tsotra fotsiny ny fandraisan’izy ireo izany.
Hanainga, ny asabotsy 3 novambra ho avy izao, ny delegasiona malagasy, tsy misy afa-tsy mpilalao roa ihany: Rakotondramboa Miary Zo, eo amin’ny lehilahy, sy Radilofe Sariaka, ho an’ny vehivavy. Voatery hianto-tena izy mianadahy, raha tsy manome tanana ny fanjakana. “Roa volana ny efa niomana ary efa vonona amin’ny vatana sy ny saina tanteraka aho. Ny olana, tsy mbola namaly ny fangatahanay ny fanjakana izay mbola anaovako antso avo hanampiany anay, hiatrehana io “Can 2018” io. Efa azoko io maraina io (omaly talata) ny “visa”ao Afrika Atsimo fa ny “visa” Botsoana no andrasana any amin’ny federasiona”, hoy i Miary Zo, mbola niatrika ny fanazarantenany, tetsy amin’ny kianja Acsa Ambohidahy, omaly.
Voamarina tanteraka teto ny filazan’ny minisitry ny Fanatanjahantena, i Faratiana Tsihoara, tamin’ny fotoana nandraisany an-tanana ny minisitera, fa ny fifidianana aloha izao no mahamaika. Nomarihin’i Miary Zo fa hiankina amin’ny ray aman-dreniny, tsy maintsy hiala vola am-paosy hiantoka azy, handehanana hiatrika ity “Can 2018” ity, sisa fanantenany satria voninahi-pirenena ny arovana.
Mijanona ho resaka ambony vavahady fotsiny aloha, hatreto, ny hoe laharam-pahamehana ny tanora sy ny fanatanjahantena. Tsy mahagaga raha fandraisana anjara hatrany ny an’ny Malagasy satria tsy afaka mifantoka ao anatin’ny fanomanana ny atleta fa mitebiteby sy miroaroa saina, na ho lasa na tsia.
Samy tsy nitazona ny teniny avokoa na ny federasiona malagasin’ny tenisy (FMT) sy ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena (MJS) fa mifanilika andraikitra.